Iintyatyambo zangempela zicinezelwe ukwenza uyilo olwahlukileyo lwamatyala efowuni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimeko ezihambayo ezenzelwe iintyatyambo zokwenyani ukwamkela intwasahlobo
Ya Sisentwasahlobo Kwaye iifowuni eziphathwayo sesinye sezixhobo esinokuthi sizenzele ngendlela ekhethekileyo ukubulela kwezo zigubungelo zinokujika imeko elusizi egrey kunye nesinyithi kwindawo efanelekileyo yomlinganiswa ohlekisayo okanye isiciko somnye weemovie zethu esizithandayo.
Oku kungaphezulu okanye kuncinci umbono we-HouseOfBlings kunye neemeko zabo ezihambayo abanokufunyanwa kuzo iintyatyambo zokwenene ukunika okona kwamkelwa kulungileyo entwasahlobo. Indlela ekhethekileyo yokubakho kwezi ntsuku zokuqala kwabo balinde ilanga kunye nesibhakabhaka esivulekileyo esiluhlaza.
Kubonakala kungakholeki ukuba i-smartphone inezinto ezininzi ezinokwenza ngokwezifiso ukuze zikwazi ukusebenzisa zonke iintlobo ezahlukeneyo zokugquma. Kukho iivenkile ezininzi ezikhethekileyo ngaphandle kokugubungela zonke iintlobo zemibala, iimilo kunye noyilo. Kubani esinako ukwenjenjalo Joyina ezo zenziwe yiNdluOfBlings ngawo wonke umbala obolekwa ziintyatyambo zokwenyani ucinezelwe ngokungathi yilezo zihlala ezincwadini xa sasisiya kufunda epakini okanye ezintabeni.
Umbono wale ndlu phantse ubambe intwasahlobo nge intyatyambo ecinezelweyo ngendlela eya kuthi inike inqaku elikhethekileyo kwifowuni yakho. Zonke iintlobo zeentyatyambo kunye nemibala yokufaka isitampu ngasemva nge-HouseOfBlings.
Le ndlu yeqweqwe ine i-Etsy yakho, apho ungathenga khona amaqweqwe I-17,43 Euro nganye. Kukho zonke iintlobo zemibala kunye neprints yokongeza uyilo olwahlukileyo lwe-14, ke iya kuba ngumcimbi wokujonga imeko ekhethekileyo yemodeli yefowuni yakho.
Omnye indlela eyahlukileyo yokuwola intwasahlobo njengexesha lokuba, ngaphandle kokutshintsha iimpahla, ikwinto efanelekileyo yokutshintsha imeko kunye nedesika yefowuni ukuze yonke into ihambisane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iimeko ezihambayo ezenzelwe iintyatyambo zokwenyani ukwamkela intwasahlobo
Indlu emile ityhubhu eyakhiwe embindini wehlathi